Taratasy fisaorana – FJKM
Fisaorana noho ny fankalazana an’Andriamanitra
Andriamatoa Filoha mivady sy ny Mpikambana ao amin’ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe FJKM,
Andriamatoa Zarazaka Jean Louis mivady , Filoha Mpanampy ao amin’ny Biraon’ny MF
Andriamatoa Andriamampianina Zaka Harimasy mivady , Mpanolotsaina ao amin’ny Biraon’ny MF
Ireo Solontena avy amin’ny FFPME sy avy amin’ny FLME ary avy amin’ny EPUdF,
Ny Filoha Mpanampy sy Mpikambana ao amin’ny Biraon’ny SP VFA (37)
Ny Mpitandrina mpiara-miasa rehetra ato anatin’ny SP VFA (37),
Ireo vahiny nasaina manokana : Mpitandrina sy Tsy Mpitandrina ombam-bady avy,
Ireo Solontena-piangonana rehetra avy atto amin’ny SP VFA 3,
Ny Biraon’ny Fiangonana sy ny Mpihevidraharaha,
Ny Filoha sy ny Birao ary ny Komity Mpanomana ny Jobily Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina,
Ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo sy ny Sampana Enina ary ny vahoaka kristiana rehetra eto amin’ny FJKM ZIONA VAOVAO PARIS,
Ry Havana rehetra ao amin’ny Tompo,
Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo(Efes 1/3),
Izahay RAKOTONIRINA Charles mivady Mpitandrina , sy ireo zanaka aman-jafinay , dia tena nahatsiaro fa notahian’Andriamanitra manokana ka dia feno fifaliana lehibe tokoa tamin’ny fahatsiarovanareo tamim-bavaka iny andron’ny ASABOTSY 08 JONA 2019 iny , izay nankalazantsika an’Andriamanitra Ray noho ny ivon’ny Jobily Fisotroan-dronono natao tao amin’ny Chapelle St Charles, tao Athis Mons.
Misaotra indrindra tompoko fa sarobidy aminay ny fitiavana nasehonareo tamin’ny alalan’ny fahafoizana fotoana sy fandavan-tena lehibe ka nampandeferanareo ny fandaharam-potoananareo araka ny tandrify anareo avy , dia ireo Raiamandreny avy amin’ny Biraon’ny MF, sy ny SP VFA (37), ary fandraisam-pitenenana avy amin’ireo solontena rehetra tonga.
Tena mankasitraka dia mankasitraka ny fanomezana natolotrareo hiatrehanay ny ho avy ka hiatrehana ny fisotroan-dronono ao aorian’ny fitsaharana amin’ny Asa maha-matihanina amin’ny maha-Mpitandrina miandraikitra fitandremana sy ao anaty ambaratongan-drafitra.
Feno hafaliana loatra ny fo sy saina amam-panahinay mianakavy kely ka tsy mahita ny teny ampy ho enti-misaotra anareo , fa dia Jesoa Kristy Tompo Ilay Lohan’ny Fiangonana sady Mpamonjy sy Tompontsika rehetra anie hamaly soa sy fitia ho aminareo rehetra, « Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany » Heb 6/10.
Misaotra dia misaotra tompoko .
Koa « Ary ny Tompon’ny fiadanana anie hanome anareo fiadanana mandrakariva amin’ny zavatra rehetra » (2Tes 3/16).
Rakotonirina J.Charles mivady sy ny ankohonany .